ယူကရိန်းသမ္မတစုံတွဲ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုမဟုတ် | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
ဘာသာစကားBurmeseEnglishEspañolFrançaisPortuguêsCatalàNederlandsPolskiČeštinaSlovenčinaالعربيةBengaliБългарскиSuomiDeutschΕλληνικαहिन्दीMagyarBahasa Indonesia한국어RomânăSrpskiBahasa Malaysiaภาษาไทย
( AFP / SERGEI GAPON)
ယူကရိန်းသမ္မတစုံတွဲ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုမဟုတ်
AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ တနင်္လာ 21 မတ် 2022 အချိန် 08:38
မူပိုင် AFP ၂၀၁၇-၂၀၂၂ ပိုင်ခွင့်အားလုံး လက်ဝယ်ရှိထားပြီး၊
ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Olena Zelenska တို့ အတူတူ သီချင်းဆိုနေကြတာလို့ ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြန်လည်မျှဝေနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းနေတာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုထဲမှာပါတာဟာ အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်က အဆိုတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တုန်းက စုံတွဲသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “Endless Love” ကို ပြန်လည်သီဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ဒီလင့်မှာတင်ထားပြီး ကြည့်ရှုတဲ့အကြိမ်ရေ ၄၂၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး စတူဒီယိုတစ်ခုထဲမှာ သီချင်းဆိုနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုအညွှန်းစာက အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။
““မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့အချစ်” သီချင်းကိုပိုင်နိုင်စွာတီးခတ်သီဆိုထားသော ယူကရိန်း သမတနှင့်သူ၏ဇနီး။ ဒီလို ကိုယ့်နိင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တဲ အနုပညာရှင်မျိုး ကမ္ဘာကြီးမှာ အများကြီး ရှိနေဘို့လိုတယ်….
ဗီဒီယို ကို ကြည့်ရင်း တကယ်ခံစားရပါတယ် ။ ။” (မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း)
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ Facebook ပို့စ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
အလားတူပြောဆိုမှုတွေနဲ့ တူညီတဲ့ဗီဒီယိုကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ ယူကရိန်းသမ္မတစုံတွဲမဟုတ်ဘဲ မူရင်းအဆိုတော် Lionel Richie နဲ့ Diana Ross တို့ ဆိုထားတဲ့ Endless Love စုံတွဲသီချင်းကို ပြန်လည်သီဆိုကြတဲ့ အဆိုတော်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုဟာ ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှုမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအလို၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တုန်းက YouTube ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ကာဗာသီချင်းတွေဆိုတဲ့ အမေရိကန်ဂီတအဖွဲ့ Boyce Avenue က Alejandro Manzano နဲ့ ဗြိတိန်အဆိုတော် Connie Talbot တို့ သီဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုရဲ့ screenshot
အောက်မှာ အဆိုတော် Manzano၊ သမ္မတမဖြစ်ခင်က ဟာသရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Zelensky၊ အဆိုတော် Talbot နဲ့ သမ္မတကတော်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot တွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Facebook မှာ တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာ အဆိုတော် Alejandro Manzano သီချင်းဆိုနေပုံကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်က ရယူထားတဲ့ screenshot
ဗြိတိန်ပါလီမန်ရဲ့ ပါလီမန်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းယူနစ် (PRU) ကနေ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဗီဒီယိုက ရယူထားတဲ့ screenshot မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တုန်းက လန်ဒန်မြို့၊ ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ကို ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကနေတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကို မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ (PRU / )
Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာ အဆိုတော် Connie Talbot သီချင်းဆိုနေတာကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၊ ရီဂါမြို့မှာတွေ့ရတဲ့ ယူကရိန်း သမ္မတကတော် Olena Zelenska (AFP/Gints Ivuskans)
ယူကရိန်းမှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မတိကျမသေချာတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို AFP က အချက်အလက်စိစစ်ထားပြီး ဒီလင့်ခ်မှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
AFP ကို အချက်အလက်စိစစ်စေလိုသည့်အကြောင်းအရာ သင့်ထံမှာ ရှိပါသလား?
E-mail Facebook Messenger Message @AFPFactCheckMyanmar
ကျွန်ုပ်တို့ကို follow ပါ
မူပိုင် AFP ၂၀၁၇-၂၀၂၂ ပိုင်ခွင့်အားလုံး လက်ဝယ်ရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့တကိုယ်ရည်၊ ပုဂ္ဂလိကအတွက်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံးအတွက်မဟုတ်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်မျှဝေအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ စာများကို အခြားသောရည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုမှုများ၊ အထူးသဖြင့် AFP နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ စာများကို အားလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေ၊ ပုံစံတူကူးယူဖော်ပြခြင်း၊ အများပြည်သူကို ဆက်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို မည်သည့်သဘောထား၊ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်စိစစ်ထားသည့်စာပါလင့်ခ်များတွင် ပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာသည် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အတည်ပြုရာတွင် စာဖတ်သူတို့ မှန်ကန်စွာနားလည်စေရန်အလို့ငှာ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာပမာဏအအလျောက် ရယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ AFP အနေဖြင့် ဤသို့သောတတိယအဖွဲ့အစည်း (third party) ၏ စာ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မူပိုင်ခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် မူရင်းတင်သူများထံမှ မည်သည့်ပိုင်ခွင့်မှ ရယူထားခြင်းမရှိပါ။ ဤသို့ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် မည်သို့သော တာဝန်မှရှိမည်မဟုတ်ပါ။ AFP နှင့် AFP ၏ တံဆိပ်လိုဂိုမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ကာ AFP ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များလည်းဖြစ်ပါသည်။